ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာပရီမီယိုများ | တိုယိုတာ ပရီမီယိုကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Pearl white Toyota Premio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် NZT260-3102717) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power...
Pearl White Toyota Premio 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Premio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 442 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Premio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Toyota Premio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Toyota Premio 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Pearl white Toyota Premio 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Silver Toyota Premio 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: P...
Silver Toyota Premio 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးက...
Silver Toyota Premio 2002 ??????? ???????????????? ????????????????????????????? ???????????????? ????????? A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ???????????????...
Silver Toyota Premio 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Black Toyota Premio 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Pearl White Toyota Premio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Premio 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 327 ညှိနှိုင်း
Grey Toyota Premio 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Toyota Premio 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passen...
Silver Toyota Premio 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ...
Silver Toyota Premio X 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver...
တိုယိုတာရဲ့ ဘရန်ထဲက ဆီဒန်ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ပရီမီယိုများကို ပြည်တွင်းမှာ အနည်းအကျဉ်းတွေ့ နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းက တိုယိုတာ မတ်စ် အိတ်ခ်ျနဲ့ ဆင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဌင်းက အနည်းငယ် ပိုပြီး ကားအရှည်တိုပါတယ်။ အင်ဂျင်က ၁၅၀၀ ကနေ စပြီး ရရှိတဲ့အတွက် ၀ယ်ယူမူ သိပ်မတွင်ကျယ်ခဲ့တာလို့ ထင်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဘယ်တာနဲ့လည်း ဆင်ဆင်ပါပဲ။ အိမ်စီးကားလေးတွေ အဖြစ်ဝယ်ယူစီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လူ (၅) ယောက်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ မျိူးဆက် နှစ်ဆက် အနေနဲ့ တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ထိ ထုတ်လုပ်နေသေးပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းက သိပ်ထင်ထင်ရှားရှား မရှိတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုးပါပဲ ။
ပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၆ ထိကို T 24 စီးရီးကားတွေကို ထုတ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ကိုရိုနားနဲ့ ကိုရိုနား ပရီမီအို တို့ရဲ့ အောင်မြင်မူ တစ်ခုအနေနဲ့ ဌင်းကားများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဆိုဒ် သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ ၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီတို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီမီအိုကားတွေကိုတော့ ဘရိတ် မီးကို ပိုပြီး ထင်ရှားအောင် အနည်းငယ် လုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၇ ကနေ နောက်ပိုင်းထိ ထုတ်တဲ့ T26 စီးရီးကားတွေကိုတော့ ၂၀၀၇ မှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး ဌင်းကတော့ ကိုရိုလာနဲ့ ကန်မရီးရဲ့ ကြားက ကွာဟချက်ကို ပြန်လည် ဖြည့်သွင်းပြီး လုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှေ့က ဘန်ပါ၊ သံဇကာ အရစ်တဲ့ ရှေ့မီး တွေကို ပြောင်းလဲမူတွေ ပြုလုပ်ထားပြီး ပိုပြီး ဈေးကြီးတဲ့ ပုံစံ ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီး သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမူကတော့ နောက်က LED မီးတွေကို ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၀၀ စီစီရှိတဲ့ အင်ဂျင်ဟာ မြင်းကောင်ရေ ၁၃၀ ကျော်ကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပထမ မျိုးဆက် အတွက် အင်ဂျင်အနေနဲ့၁၅၀၀ စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီ၊ ၂၀၀၀ စီစီတို့ကိုရရှိနိင်ပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီတွင် နှစ်ဘီးယက်နဲ့ လေးဘီးယက် ဆိုပြီး ရနိင်ပါတယ်။ ဒုတိယမျိုးဆက်မှာလည်း အနီးစက်ဆုံး ဒီလို အင်ဂျင် ဆိုဒ်တွေ ပါပဲ။ အော်တို ဂီယာ လေးချက် တွေပါပဲ။ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၂ ကနေ ၂၀၁၀ ထိကို ပရီမီအို မော်ဒယ်တွေတွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အင်ဂျင် ၁၅၀၀ စီစီမှာ စီးနင်းကြပါတယ်။ အရောင်အားဖြင့် အဖြူ၊ အမည်း၊ ပုလဲနဲ့ ငွေရောင်တို့ကို တွေ့နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ ပရီမီအိုရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်ထဲမှာ ကား ဒီဇိုင်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် နိုးရာမှာ သော့မလိုပဲ ခလုတ်နဲ့ သွားနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်လာပြီးအပြင်ပိုင်းကားကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပုံစံ တစ်ခုမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းရိုးတာကြီးလည်း မဟုတ်ဘဲ မီးလုံးတွေက ခေတ်ဆန်ပြီး ချွန်ထွက်ပေမဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကား အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ မသိမသာ ရိုးရှင်းသွားပါတယ်။ ရှေ့မှာ မြူခွဲမီးပါ ပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းက မီးလုံး ဒီဇိုင်းကတော့ အတွင်းဖက်ကို ချွန်ပေးထားပါတယ်။ အတွင်းဖက်ကတော့ တိုယိုတာ စီးရီးထဲက တိုယိုတာ ခရောင်းနဲ့ အနည်းငယ်ဆင်ဟန်ရှိသော်လည်း အနည်းငယ် ပုံစံ ကွဲပြားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ခန်းကားထိုင်ခုံကတော့ (၃) ယောက်စီးအတွက် တစ်ဆက်တည်း ပြုလုပ်ထားပေးတဲ့ ထိုင်ခုံ မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်းခွက် ပုံစံကို တံခါးတွေရှိ လက်ရန်၊ ဂီယာဘောက်စ်နဲ့ ဒတ်ရှ် ဘုတ် အစပ်၊ ဒတ်ရ်ှဘုတ်ရဲ့ အချို့နေရာတွေမှာ ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကျွန်းခွက်အရောင်ကိုတော့ အနုအရင့် ရွေးချယ် တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ် အနိမ့်တွေ ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွေမှာ တွေ့ရသည့်နည်းတူစွာ ကျပ်သိန်း ၁၃၀ နဲ့ ၁၄၀ လောက်မှာ ဌင်းတို့ကို ၀ယ်ယူ ရနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပရီမီအိုတွေဆိုလျှင် ၁၉၀ သိန်း နဲ့ ၂၀၀ သိန်း လောက်မှာ ရနိင်ပါမယ်။ ပျဉ်းမျှဈေးကတော့ ၁၈၀ သိန်းစ နဲ့ ၁၉၀ လောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ ကား ဂရိတ်ပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းမှာ ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ ပရီမီယိုလေးတွေဟာ ၁၅၀၀ စီစီရှိတဲ့ အင်ဂျင်ကနေ စတယ်ဆိုပေမဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မှာ အနည်းငယ် တစ်ခြားကားတွေနဲ့ မတူ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ဆွဲငင်တဲ့အား ရှိပြီး အတွင်းဖက်ပိုင်းကလည်း သူရဲ့ လိုင်းပုံစံလေးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့အတူ တစ်မှု ထူးခြားစွာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အရင် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ကိုရိုလာနဲ့ ကန်မရီး ကားတွေရဲ့ ဒီဇိုင်းကွာဟမှုကို ပြန်လည်း ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကား တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်စီးကား၊ ရုံးစီးကားတွေအတွက် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။